टीकापुर मुद्दा फिर्तासँग जोडिएका प्रश्न
दिपेन्द्र झा print
अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा के बोलुँजस्तो लागेर टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता सन्दर्भमा सरकारले गरेको निर्णयपश्चात्त मौन बसेको थिएँ। फेरि आफैंले मुद्दाको एक पक्ष भएर बहस गरेकोले पनि केही नबोलौं भनी चुप्पी साँधेको थिएँ। त्यसमा पनि गत हप्तामात्रै कैलाली कारागारमा रहेका घर जग्गा लिलाम हुन थालेका लाहुराम चौधरी, बीरबहादुर चौधरी र परिवारलाई छाक टार्न गाह्रो भएका विश्राम चौधरीको अनुहार सम्झें। त्यसकारण केही नलेखी बस्न सकिनँ। मेरो आफनै अध्ययनको पुष्ठभूमि मानव अधिकार कानून भएकोले।
अदालतले निर्णय नगरीकन हामीले कसैलाई पनि अपराधीको रुपमा सार्वजनिक रुपमा भन्नु, प्रस्तुत गर्नु त्यस्तो आशयले कुनै टिप्पणी गर्नु वा संकेत पनि निष्पक्ष सुनवाईको मान्यता विपरीत हो। गत मधेश आन्दोलनमा पनि प्रहरीबाट झण्डै चार दर्जन मारिए यसकारण प्रहरी मारिएको घटनाको मुद्दा फिर्ता हुनु पर्छ भने तर्क म गर्दिनँ। किनभने दुइटा गल्ती मिलेर एउटा सही हुन सक्दैन। मान्छे मारिनु आफै‌ंमा अपराध हो चाहे बर्दी लगाएका मारिउन् वा नलगाएका। यस्ता अपराधको सुक्ष्म, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान, स्वच्छ सुनवाई र अभियोजन हुनु पर्दछ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैंमा अहिले अपुरो र अस्पष्ट छ। कानून मन्त्रालयमार्फत् गृहबाट फाइल झिकाउने। यस्तो पनि निर्णय हुन्छ। फाइल झिकाउने काम प्रशासनिक र प्राविधिक हो। यसका लागि पनि निर्णय गरी राख्नु पर्दछ र? यो त भीड भड्काउनलाई गरिएको जस्तो पो देखियो। हुँदै नभएको निर्णयको हवाला दिएर मच्चाइएको कोलाहलको कुनै अर्थ छ? जघन्य अपराधमा संलग्न कुनै व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता भएको निर्णयपश्चात्त यस्तो प्रतिक्रिया आएको भए उपयुक्त मान्न सकिन्थ्यो।
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी परिवारप्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्घान्जली छ। सही न्याय पाउने परिवारको पूर्ण अधिकार छ। एक जना वकिलको हैसियतले मैले घटनाको तथ्य, प्रमाण र सम्पूर्ण फाइलको सुक्ष्म विश्लेषण गरेर हेर्दा धनगढी कारागारमा रहेका गोटा एक दुई जनाबाहेक अधिकांश व्यक्ति घटनामा सरोकार नभएकालाई गत २ वर्षदेखी बन्दी बनाएर राखिएको छ। राजनितिक आस्था, थारु अनुहार र मतदाता नामावलीको नामको आधारमा जाहेरीमा नाम समावेश गरिएका छन्। घटनाका वास्तविक दोषी हुन सक्ने उम्किएका छन्।
वास्तविक दोषी उम्किराख्ने र घटनालाई ‘स्क्याण्डलाइज’ गरेर निर्दोष २२ जनालाई २ वर्षदेखि थुनेर कारगारमा राखिएको छ। उनीहरुको मासिक, पारिवारिक, आर्थिक र मनोदशा नेपाली राज्यप्रति के भएको होला? कहिले कल्पना गरेका छौं हामीले? के हाम्रो न्याय प्रणाली पनि भीडको विचारले नै नियन्त्रित हुने हो कि वैज्ञानिक फौजदारी अनुसन्धान पद्धति, निष्पक्ष सुनवाई र अदालतको निणर्यले। मैले यति भनिराख्दा प्रहरी परिवार र सानो बच्चा गुमाएको परिवारलाई परेको पीडा मैले मेरी छोरी आर्या गुमाए कस्तो हुन्छ सजिलै समपीडा अनुभुत गर्न सक्छु। हाम्रो फितलो अनुसन्धान पद्धति, राजनीतिक र सामुदायिक पूर्वाग्रह र तथ्य नबुझिन गरेको सार्वजनिक टिप्पणीका कारणले वास्तविक अपराधीले उन्मुतिm पाउने र निर्दोषले सजाय पायो भने ती प्रहरी परिवारप्रति पनि न्याय हुँदैन। न त प्रहरी कै मनोबल उच्च राख्न सकिन्छ। मुद्दा र्फिता अहिले चलेको बहसले अन्ततः चोरलाई चैतारा र साधुलाई शुलीमा पुरयाउने छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ६, २०७४ १८:०३:३०